Guddoomiye Muudeey “Dastuurka sax ma noqon karo inta Soomaaliland maqantahay” – Kalfadhi
Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Wali Sheekh Irbaahim Muudeey ayaa sheegay in uusan sax noqon karin Dastuurka Soomaaliya inta ay maqantahay Soomaaliland.
Cabdi Wali Sheekh Ibraahim Muudeey ayaa sheegay in dadaal kasta oo la bixiyo aysan sax aheyn in dastuurka la dhameestiro iyadoo ay maqan tahay Soomaaliland waxa uuna ku taliyay in waqti dheer la geliyo wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland.
“Anniga ma aaminsani Dasatuurka in uu noqon karo Dastuur sax ah inta Somaliland maqantayah” ayuu yiri Guddoomiye Cabdi Wali Sheekh Ibraahim Muudeey oo maanta ka hadlay fadhiga Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Guddoomiye ku xigeenka Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku taliyay in la xoojiyo wadahadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland maadaama waqtiga uu sii dhamanayo Madaxda Dowladda Soomaaliya ayuu ka dalbaday in ay xoojiyaan dadaalkooda ku aadan sii wadidda wadahalka Soomaaliya iyo Soomaaliland.
“Waxaan ugu baaqayaa madaxda Dowladda Soomaaliya in ay dar dar geliyaan wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland, waxaana darted hakad ugu jira arimo badan” ayuu yiri Cabdi Wali Sheekh Ibraahim Muudeey.
Inta badan Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku baaqayay in la dar dar geliyo dhameestirka wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland halka qaar kalane ay qirayeen in laga gaabiyay sii wadda wada-xaajoodka labada dhinac.